Shaxdii Ugu Dambaysay Ee Ay Ku Wada Ciyaareen Manchester United Iyo Liverpool Markii Ugu Dambaysay Ee Ay Hoggaanka Isku Haysteen - Akhriso Xiddigihii Ugu Soo Bilowday Koox Walba | Laacibnet.net
Shaxdii Ugu Dambaysay Ee Ay Ku Wada Ciyaareen Manchester United Iyo Liverpool Markii Ugu Dambaysay Ee Ay Hoggaanka Isku Haysteen – Akhriso Xiddigihii Ugu Soo Bilowday Koox Walba
Jamaahiirta Manchester United ayaa u hammuun qaba inay arkaan kooxdooda oo ka sarraysa Liverpool isla markaana hoggaanka horyaalka Premier League haya, waxaanay taas arkeen habeenkii xalay markii ay 1-0 kaga badiyeen naadiga Burnley.
Manchester United oo hoggaanka horyaalka qabata waxa ugu dambaysay 40 bilood ka hor oo ay ahayd September 2017kii, laakiin waqtigaasi wuuy ka beddelnaa xilligan oo kale sababtoo ah waxay ahayd bilowga horyaalka.
Laakiin inay bishan January oo kale qabato hoggaanka waxa ugu dambaysay xilli ciyaareedkii 2012-13, waqtigaas oo uu kooxda maamulayay Sir Alex Ferguson oo inta uu horyaalka kusii guuleystay shaqada ka fadhiistay.
Xili ciyaareedkan oo ay mar kale kasoo muuqdeen hoggaanka oo ay waliba saddex dhibcood ku qabteen iyadoo bisha January lagu jiro, waxay taageereyaasha xasuusinaysaa sidii ay labadan kooxood labadan kaalmood ugu kala jireen markii ugu dambaysay ee ay horyaalkana ku loollamayeen oo ahayd 2008-09.
Manchester United ayaa sannadkaas ku guuleysatay horyaalka Premier League, halka kaalinta labaadna ay gashay Liverpool, waana arrin ay jamaahiirta Liverpool ka dagaallamayaan inay mar kale ku dhacdo.
Sannadkaas, Ferguson oo hoggaaminaya Manchester United ayaa waxa uu helay 90 dhibcood oo horyaalka Premier League, isagoo 28 guulood soo hooyey, lix barbarro ah iyo afar kaliya oo laga badiyeyna ay u raaceen.
Liverpool waxa waqtigaas tababare u ahaa Rafael Benitez, waxaana ay xili ciyaareedka ku dhamaysatay iyadoo afar dhibcood oo kaliya ka dambaysa Manchester United, isla markaana haysata 86 dhibcood. Waxa kale oo Liverpool ay sannadkaas guul-darraysatay afar ciyaarood oo kaliya halka Manchester United laga badiyey lix, laakiin waxa ku badnaa barbarraha oo 11 ciyaarood ay gashay.
Edwin van der Sar ayaa ciyaaray 33 kulan oo Premier League ah, halka Pepe Reina oo ahaa goolhayaha Liverpool uu isaguna ka mid ahaa toddoba ciyaartoy oo Premier League ah oo dheelay 3,420 daqiiqadood.
Xiddigihii loo nisbaynayay inay Manchester United ka badbaadiyeen guul-darrooyinka ee khadka dambe ee difaaca taagnaa waxa ka mid ahaa Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic oo ay garbahooda amaba labada dhinaca ee bidix iyo midig ka xigeen Patrice Evra iyo John O’Shea oo ay iska sugayeen booskaas Garry Neville.
Rafael Benitez waxa uu isaguna haystay Jamie Carragher oo difaaciisa koowaad ahaa, dhamaanna saftay 38kii ciyaarood ee horyaalka, waxaana caawinayay oo uu marba midkood ka garab ciyaarayay Martin Skrtel iyo Daniel Agger, halka Sami Hyypia uu isaguna ahaa mid la isticmaalo marka loo baahdo, balse difaacyada dhinacyada ayay hayeen Avlaro Arbeloa iyo Fabio Aurelio.
Khadka dhexe waxay Liverpool haysatay Javier Mashcerano, Xabi Alonso iyo Steven Gerrard oo ciyaaray in ka badan 2,300 daqiiqadood. Lucas Leiva oo madaale ahaa, ayaa isaguna si weyn uga soo dhex muuqday Anfield.
Manchester United waxa iyadana tiir-dhexaad u ahaa Paul Scholes iyo Anderson, halka Michael Carrick iyo Darren Fletcher ay iyaguna ahaayeen labada laacib ee lama-taabtaanka u ahaa Ferguson.
Sir Alex Ferguson wuxuu ku xoogganaa afka hore iyo dhinacyada weerarka uu haystay Cristiano Ronaldo oo ciyaaray 2,749 daqiiqadood iyo Park Ji-Sun oo dheelay 1,728 daqiiqadood halka Ryan Giggs uu 1500 ciyaaray, sidoo kalena Nani oo kayd ahaa uu isaguna kasoo muuqday 525 daqiiqadood.
Liverpool halkan ayay ku liidatay, waxaanay haysatay Yossi Benayoun oo 1,890 daqiiqadood kasoo muuqday safka hore, Alberto Riera oo 1,898 minit ciyaaray halka Dirk Kuyt oo madaalaha kooxda ahaa iyo Fernando Torres oo 14 gool dhaliyey ay iyaguna ahaayeen hubka ugu weyn ee uu ku dagaal geli jiray Rafa Benitez.
Ryan Babel, Robbie Keane iyo David N’Gog ayaa iyaguna kasoo muuqday safka Liverpool.
Laakiin kooxda horyaalka qaadatay ee Manchester United waxay afka hore ku haysatay dileyaal dhaawacooduna yar yahay oo mishiinka goolasha ahaa, sida Dimitar Berbatov oo 2,542 daqiiqadood ciyaaray, Wayne Rooney oo 2,264 minit dheelay, Carlos Tevez oo 1,859 daqiiqadood ciyaaray, kuwaas oo dhaliyey 26 gool, halka Cristiano Ronaldo uuu kalidii saxeexay 18 gool.
Halkan kaga bogo shaxdii labada kooxood